Tue, Jul 14, 2020 at 4:52am
काठमाडौँ, ८ असार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशको गौरवमय सांस्कृतिक पहिचानको उत्खनन गरी ‘नेपाल दर्शन’ ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने योजना अघि सारेको छ । मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदाको स्थलगत अध्ययनबाट वस्तुगत विवरण सङ्कलन गरेर विश्लेषणसहित नेपाली र अङ्ग्रेजी संस्करणमा ग्रन्थ प्रकाशन गरिने भएको हो । प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले विदेशीहरुलाई समेत नेपालको सम्पादाबारे देखाउन मिल्ने प्रकाशनको अभाव भएकाले त्यस्तो प्रकाशनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रयरुपमा नेपाली गौरवको..
एजेन्सी, ६ असार हिन्दुहरूमा प्रणामको आफ्नै महत्व छ । मान्यताका अनुसार आफूभन्दा ठूलोको पाउमा ढोगर प्रणाम गर्नु यहाँको संस्कृति हो । यसरी ढोग्दा मानिसले जमिनमा पूरै सुतेर टाउकोले मान्यजनको पाउ छुन्छन् जसलाई साष्टांग प्रणाम भनिन्छ । आठवटा अंगसिहत गरिने प्रणाम भएकाले सा)षंग भनिएको हो । तर यो पुरुषका लागि मात्र विधान गरिएको छ । महिलाका लागि यो वर्जित छ । यो आसनमा शरीरका..
काठमाडौँ, ६ असार हरेक वर्ष २१ जुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन थालिएपछि योगको चर्चासँगै यसका प्रवर्तक पतञ्जलिको सम्झना गर्न थालिएको छ । पतञ्जलिले योगमा मात्र योगदान गरेका होइनन्, उनले आयुर्वेद र व्याकरणको विकासमा समेत योगदान गरेका छन् । पतञ्जलिको जन्मको सम्बन्धमा एकमत नभएपनि मेरो अध्ययन र अनुसन्धानले उनको जन्म नेपालकै अर्घाखाँची जिल्लामा भएको देखाएको छ । विभिन्न शास्त्रहरू र स्वयम् पतञ्जलिले लेखेका ग्रन्थको..
काठमाडौं, ३१ जेठ धेरै मानिसहरुको मनमा भगवान श्रीरामचन्द्र र श्रीकृष्णको रुप किन निलो भन्ने प्रश्न जाग्ने गर्छ । भगवान श्रीकृष्ण जन्मदा गोरो नै जन्मिनुभएको थियो । तर यमुनामा रहेका कालिनागको विषको प्रभावले उहाँको छालाको रंग निलो भएको बताइन्छ । भगवान श्रीरामचन्द्र कसरी निलो ? तपाई हेर्नुहोस आकाशको रंग निलो छ । समुन्द्रको रंग निलो छ । समुन्द्रको रंग त आकाशको छायाको कारण..
काठमाडौँ, २७ जेठ । संस्कृतमा लेखिएको दुई मध्येको एक ठुलो ग्रन्थ ‘महाभारत’ कथै कथाले भरिएको छ । १ लाख भन्दा बढी श्लोकले यो बाइबल भन्दा ३ गुणा ठुलो ठहरिन्छ । भनिन्छ, ‘यहाँ जे भेटिन्छ, त्यो अन्तत्र पनि भेटिन्छ तर यहाँ जे भेटिदैन त्यो अन्तत्र कतै पनि भेटिदैन ।’ आउनुहोस्, महाभारतका केही नबताइएका कथा पढौं । पुराना दिन महाभारतको युद्ध हुनु भन्दा धेरै पहिले, जब..
ललितपुर, २३ जेठ । झण्डै १६ वर्ष पहिलेदेखि रातो मछिन्द्रनाथको मूल पूजारीका रुपमा देवताको सेवामा लाग्दै आउनुभएको कपिल बज्राचार्य ६७ वर्षको हुनुभयो । उहाँ २२-२३ वर्षको उमेरदेखि मछिन्द्रनाथको पुजारीका रुपमा देवताको सेवा गर्दै आउनुभएको छ । बज्राचार्य आफूलाई रातो मछिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउनेमध्येका एक गुरु बन्धुदत्त बज्राचार्यको सन्तान भएको दावी गर्नुहुन्छ । ५ दशक देवताको नाममा : उहाँले देवताको सेवामा बिताउनुभएको यो पाँच दशकमा पूजा..
बर्दिवास, २१ जेठ महोत्तरीसहित मिथिला क्षेत्रमा विवाहित महिलाले बरसाइत (वटसावित्री) पर्व मनाएका छन् । जेठ कृष्ण औंशीका दिन सोमबार अटल सौभाग्यको कामना गर्दै ब्रत बसेका विवाहित मिथिलाका महिलाले आज बिहान सूर्योदयपछि यो पर्व साङ्गता (समापन) गरेका हुन् । सत्य युगमा सति सावित्रीले आफ्नो तपश्या र साधनाले जेठ कृष्ण औंशीका दिन अटल सौभाग्यको बरदान पाएको विश्वासको आधारमा उक्त दिन अटल सौभाग्यको कामनाका साथ..
काठमाडौँ, १५ जेठ जीवनमा लगातारको भाग दौड र अनेक प्रकारका उल्झनले गर्दा हाम्रो मन बिचल्लित भइरहन्छ I यस अवस्थामा ध्यान वरदान स्वरूप रहन्छ I यस्तो अवस्थामा ध्यान गरेर अनियन्त्रित मन तथा आन्तरारिक उथलपुथल लाई धेरै हद सम्म ठिक गर्न सकिन्छI लगातारको सोच या बिचारले हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असर देखाउँछ I जसले हामीलाई नमसिक र शारीरिक दुवै रूपमा कम्जोर बनाउँछ I यसको असर..
काठमाडौँ, १४ जेठ । अध्यात्मले हाम्रो जीवन टिकाएको हुन्छ । अध्यात्म र हाम्रो जीवन यी दुई नङ र मासु, हाड र छाला वा शरीर र श्वास समान छन् । यी दुई भिन्न–भिन्न नभई एक–अर्काका परिपूरक हुन्, एक–अर्काका सहयोगी हुन् र एक अर्काका मित्र हुन् । मित्र मात्र नभई परममित्र हुन् । यी दुईको मिलनबाट मात्रै हाम्रो जीवन ‘स्वर्गीय जीवन’ हुन्छ । त्यसपछि जीवन..
काठमाडौँ, ५ जेठ । मानिसको एउटै मात्र समस्या छ, त्यो समस्या हो आत्मविश्वास गुम्नु । आत्मविश्वास गुमिसकेपछि मानिस यति गहिरो दलदलमा फस्छ कि उठ्न कठिनाइ हुन्छ । सबै समस्याको जड हो आत्मविश्वासको कमी । र, सबै प्रकारको सम्पन्नता हो, आत्मविश्वास बढ्नु । जुन व्यक्ति आत्मविश्वासी छ, त्यो व्यक्ति कहिल्यै कसैको दवाबमा पर्नु पर्दैन । हेपिनु पर्दैन, पीडित हुनै पर्दैन । मलाई..
काठमाडौँ, ३ जेठ ऐतिहासिक वाग्मती तीर्थयात्रीको समूह बिहीबार सात तीर्थको भ्रमण गर्दै साँखु बज्रयोगिनीमा पुगेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ प्राकृतिक सौन्दर्य रहेको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मनमोहक क्षेत्र वाग्द्वारबाट बिहीबार बिहान शुरु भएको यात्रा बूढानीलकण्ठलगायत सात तीर्थ पार गर्दै साँखु बज्रयोगिनी पुगेको हो । यसक्रममा पर्ने सात तीर्थमा स्नान, पूजा र दर्शन गरियो । तीर्थमा यज्ञसहित सात पार्थिव लिङ्ग पूजनसमेत गरिएको थियो..
काठमाडौँ, २ जेठ । एउटा प्रश्न प्राप्त भएको छ, ब्रह्मचर्य भनेको के हो ? ब्रह्मचर्यमा उपलब्ध नभईकन कुनै पनि मानिस बोधमा जान सक्दैन । ध्यानस्थ हुन सक्दैन । ध्यानको लागि ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक छ । केलाई ब्रह्मचर्य भनिन्छ । हामीले जसलाई ब्रह्मचर्य भनेर बुझेका छौं, यो पनि ध्यानको लागि उपयोगी छ । तर, त्यसले पुग्दैन । त्यो वास्तविक ब्रह्मचर्य हैन । हामीले..
जीतपुर, १ जेठ । कपिलमुनि ऋषिले माता देवहुतिलाई साङ्ख्य योगदर्शन प्रदान गर्नुभएको पुण्यभूमि शान्ति ध्यान केन्द्र आश्रम एवं कपिलधाम यति बेला बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बनेको छ । यो महर्षिहरुले तपस्या गरेको स्थल हो । वर्तमान कपिलवस्तु जिल्लाको वाणगङ्गा नगरपालिका–९ भलवाडमा कपिलधाम अवस्थित छ । कपिलवस्तु जिल्लाको नामसमेत महर्षि कपिलमुनिको नामबाट राखिएको विभिन्न जानकार बताउँछन् । कपिलधाम ७२ बिघा क्षेत्रफलमा छ..
काठमाडौँ, ३० वैशाख ‘यो चे वस्ससतं जीवे–दुस्सीलो असमाहितो, एका हं जीवितं सेच्यो – शीलवन्तस्स झाथिनो’ अर्थात् ‘दुराचारी व्यक्तिको सय वर्षको जीवनभन्दा शीलवान् व्यक्तिको एक दिनको जीवन नै उत्तम छ’, गौतमबुद्धको यो महत्वपूर्ण वाणीले मानव जातिलाई नैतिक सत्कर्मको महत्वपूर्ण पाठ पढाएको छ । मानिसलाई नैतिकवान् बन्न सजिलो छैन । त्यसका लागि पञ्चशीलको पालना गर्नुपर्छ । पञ्चशील नैतिकता सिकाउने बुद्धको सबैभन्दा उत्तम शिक्षा हो..
पोखरा, २६ वैशाख । ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्व बोकेको पोखराको छोरेपाटनस्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफामा आरती सेवा सञ्चालन गरिएको छ । विश्वशान्तिको कामनासहित पारिवारिक सुख, शान्ति, पितृउद्वारलगायतका विविध लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको आरती सेवा प्रत्येक हप्ताको सोमबार साँझ एक घण्टा सञ्चालन गरिने भएको हो । तीन गुरुद्वारा शुद्ध गाईको घ्यू, कपुर, ज्योतिलगायतका पूजाका सामग्रीको माध्यमबाट गरिने आरती विशेषगरी शिव, विष्णु भगवान् तथा दुर्गादेवी..
काठमाडौँ, २४ वैशाख । वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन आज दान, होम, जप, तप गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदैछ । वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिन गरिने दान, होम, जप, तपको फल अक्षय अर्थात् कहिल्यै नष्ट नहुने भएकाले यस दिनलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो । यो दिन जौको सातु–सर्वत दान गरेर र आफू पनि खाने परम्परा छ । पौराणिक ग्रन्थहरूमा त्रेतायुगको आरम्भ यसै दिनबाट भएको..
तनहुँ, २३ वैशाख तनहुँको व्यास नगरपालिकामा बसोबास गर्ने ३९ जातजातिका संस्कृति समेटेर वृत्तचित्र तयार गरिएको छ । शिक्षा, पर्यटन र संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको साभ नेपाल संस्थाले व्यास नगरपालिकाको सहयोगमा सो वृत्तचित्र तयार गरेको हो । नेपाली समाजले मौखिक रुपमा जोगाउँदै आएका लोक परम्परा र लोक व्यवहारको खोजी गर्दै लिपीबद्ध गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने जातजातिको संस्कृतिलाई वृत्तचित्रमा उतारिएको साभ नेपालका..
काठमाडौँ, २१ वैशाख आज मातातिर्थ औंसी अर्थात् जन्मदिने आमाको बिशेष सम्झना, आदर र सम्मानका साथ यो पर्व मनाईएको छ । नौ महिना गर्भमा राखेर सन्तानत्व प्रदान गर्ने आमाको महिमा अपरमपार छ । छोराछोरीहरुले मातालाई सम्झेर मुख हेर्ने दिनको रुपमा यस दिनलाई बिशेष रुपमा मनाउने गरिन्छ । नेपाली समाजमा संसार देखाउने ममतामही प्रतिको आस्थाका रुपमा धुमधामले आजको दिनलाई हेर्ने गरिन्छ । आज आमाहरुको दिन, जस्ले सबै..
ललितपुर, २० वैशाख । वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आइतबार पुल्चोकमा हुने भएको छ । हरेक वर्ष वैैशाख शुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन रातो मच्छिन्द्रनाथलाई तःबहालस्थित मन्दिरबाट बाजागाजा र पूजाआजासहित खटमा राखेर पुल्चोकमा निर्माण गरिएको रथमा लगेर विराजमान गराइन्छ । यही वैशाख ७ गते कृष्ण प्रतिपदाको दिन लगनखेलको डबलीमा राखेर मच्छिन्द्रनाथलाई महास्नान गराइयो । आज रातिदेखि विविध विधिअनुसार भगवान्को दशकर्म जस्तै न्वारान,..
काठमाडौँ बैशाख १८ । जब हामी दुख को पर्खाल नाघ्न सक्छौँ तब मात्रै सफलताको शिखर चढ्न सक्छौँ । दुखको महासागरमा तैरिरहेका हामी कसैलाई पनि दुख मन पर्दैन् । जे जति दुख गरका हुन्छौँ त्यो गरेको पनि दुख बाट मुक्ति पाउनकै लागि हो । जीन्दगीका खुड्कीलाहरु पार गर्दै जाँदा कुनै यस्तो दिन आउँछ त्यो हो मृत्यु । जुन ठाउँमा पुगिसकेपछि हामी कसैले पनि..
रसुवा, १७ वैशाख रसुवागढी हुँदै चीनको भू–भागमा अवस्थित मानसरोवर तीर्थ जाने यात्रुको आगमन शुरू भएको छ । अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीका प्रमुख विष्णु घर्तीका अनुसार मानसरोवर तीर्थका लागि फाटफुटरूपमा भारतीय तीर्थ यात्रुको आगमन भइसकेको र तीर्थका लागि रसुवागढी नाकाबाट दुई चरणमा १२ जना त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् । हेमन्त र शिशिर ऋतुको समय अर्थात मङ्सिर, पुस र माघ महीनामा परेका हिउँ..
काठमाडौँ, १६ वैशाख नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृति दिने पात्रोे प्रकाशन भएपछि भित्तेपात्रो प्रकाशकले तिथिमिति सारेर प्रकाशन गर्दा प्रतिलिपि अधिकार हनन् हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रका प्रकाशक मात्र होइन, सरकारी संस्थाले प्रकाशन गर्ने भित्तेपात्रोमा समेत तिथि मात्र होइन विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, नवान्नप्राशन जस्ता धार्मिक कृत्यको साइत उल्लेख हुने गरेको छ । यस्ता संस्थाले आफैँ गणित गरेर ती साइत निकालेर उल्लेख गरेका..
काठमाडौँ १३ बैशाख । धर्म अनुसार व्यक्तिलाई जिउने एक फरक नियम र कानुन दिएको हुन्छ । यद्यपी आफ्नो धर्म र आस्थामा विश्वास राख्ने हर कोहीले नियम विपरित भएर जान सक्दैनन् । आफ्नो धर्मले सिकाएको बाटोलाई सबैले पालना गर्छन भन्ने छैन् । तर त्यस्ता गल्तीहरुलाई जीवनभरी सजाय भोग्नुपर्दा आफुले सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सम्भव हुँदैन् । सम्पति कमाउने र आलिसान जीवनयापन गर्ने..
ललितपुर, ११ वैशाख काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्राका रुपमा रहेको रातो मछिन्द्र्रनाथको जात्राका लागि रथ बनाउन शुरु भएको छ । सहकालका देवता मछिन्द्रनाथको दशकर्म शुरु भएसँगै रथ बनाउने काम भइरहेको ज्योतिष दैवज्ञ कीर्तिमदन जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदाका दिनमा महास्नान गरेपछि देवताको दशकर्म र रथ निर्माण दुवै सँगसँगै शुरु भएको हो । वैशाख शुक्ल प्रतिपदासम्ममा पुजारीले देवताको दशकर्म सक्ने र..
काठमाडौँ ६ बैशाख । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार गुरुवार अर्थात् बिहीवारलाइ भगवान नारायण अर्थात् बिष्णुको विशेष दिनको रुपमा समेत पुजा गर्ने गरिन्छ । मान्यताका अनुसार बृहस्पति ग्रह अन्य ग्रह भन्दा भारि हुने भएकाले पनि बृहस्पति अर्थात् बिहीवारलाइ विशेष मान्य गरिन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार गुरुवार यी काम गरेमा तपाइको बच्चा र पतिको आयु घट्न सक्छ वा ठुलो दुर्घटना हुन् सक्छ । महिलाको जन्मकुण्डलीमा..
काठमाडौँ, ४ वैशाख । ज्योतिषले दानद्वारा पाप नाश गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । दान पनि सम्बन्धित अनुसार भिन्न भिन्न जो वस्तु जुन ग्रहसित सम्बन्ध राख्दछ । उपर्युक्त ग्रहको सम्बन्धित सामग्री वस्तुको दान गर्ने व्यवस्था वर्णन गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा म आज यहाँहरुलाई ग्रह अनुसार सम्बन्धित् वस्तुका बारेमा साथै कुन ग्रहका लागि कुन देवको पूजा गर्दा पाप नाश भइ..
काठमाडौँ, २ वैशाख । त्यागबाट मोह नाश हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर त्याग्नको लागि आफूसँग हुनुप¥यो । त्याग्न जरुरी छ । त्याग्ने अभ्यास हुनुपर्छ । एक–एक कुरा गरेर छोड्दै छोड्दै जानु छ । किनभने अन्तिममा शिवस्वरुपमा आफूलाई लिएर जानु छ । यी बिकारहरु लिएर जान सकिन्न । मेरा कमाइहरु लिएर जान सकिन्न । किनभने मेरा प्रत्येक कमाइहरुमा अहं हुन्छ ।..
काठमाडौँ चैत २५ । नयाँ वर्ष लागेसँगै सबैको मनमा नयाँ हर्ष उमंग छाएको हुन्छ । सबैले आफ्नो घर परिवारमा सम्बन्ध राम्रो होस्, खुसी छाओस्, नयाँ वर्षसँगै नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसरहरु प्राप्त होस्, भन्ने चाहना रहेको हुन्छ । यद्यपी आफ्नो घरमा राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने नयाँ वर्षको दिन केही उपायहरु अपनाउनु जरुरी हुन्छ । १.स्वास्थ्यमा समस्या आइरहने धनमा समस्या आउने जस्ता..
काठमाडौँ चैत्र, २४ २०७५ चैत्र २४ गते आइतवार देखि ३० गते शनिवार अर्थात २०१९ अप्रिल ७ देखि १३ सम्मको साप्ताहिक राशिफल मेषः साता मध्यम उपलब्धिकर देखिएको छ । शुरुको दिन मानसम्मान प्राप्त हुने, यशकृति बढ्ने, मानसिक शान्ति मिल्ने छ । मिष्ठान्न भोजन, रमाइलो वातावरण जुट्ने छ । सोमवार मध्याह्नपछि धनोन्माद बढ्नाले सञ्चित धनको खर्च हुनगई ढुकुटी घट्नसक्ने सम्भावना छ संयम अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ..
काठमाडौँ, २२ चैत देशभरी छरिएर रहेका नेवार समुदायले बिहीबार हर्षोल्लासका साथ पाँहाचह्े पर्व मनाएका छन् । पाँहाचह् नेवार समुदायको दोस्रो ठूलो चाड हो । बिहानदेखि नुहाइधुहाइ गरी चोखो पारी विभिन्न थरिको भोज बनाउनुका साथै साँझपख सडकको खाल्टोमा लुकेर बसेको लुकुमहाद्योको पूजा गर्ने गरिन्छ । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर दोलखा, पाल्पा आदि ठाउँमा छरिएर बसेका नेवार समुदायले मनाउने यो चाड काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायको विशेष..
Results 205: You are at page3of 7